Inkonzo - shandong Gaoqiang New Material Technology Co., Ltd.
1. Nceda unxibelelane nendoda ethengisa. Sinokukunceda kakuhle:
2. Inkonzo yokuthengisa kwangaphambili
Nceda usixelele imveliso ofuna ukuyithenga. Umntu othengisayo uya kukunika ingxelo yovavanyo ngomfanekiso wevidiyo okanye ividiyo. Ezinye iinkcukacha zovavanyo zivela e-china, ezinye zivela phesheya.
Siqokelele idatha ethile kubathengi bam. Ukuba ukufutshane kakhulu, idatha iya kuba nexabiso eliphezulu kakhulu.
Emva kokuba usete iodolo, umntu othengisayo uya kukubonisa ishedyuli yemveliso kwaye ujonge iziphumo zovavanyo. Gcina enye isampulu. Isampulu iqatshelwe ngomhla, igama lemveliso, ilizwe. Kuzolunga igcinelwe unyaka omnye.
3. Emva kokuthengisa inkonzo
1) Ngenxa yezi zinto zekhemikhali, ngamanye amaxesha asinakukwazi ukulungisa ingxaki kwi-intanethi. Singabhabha kwisityalo sakho se-batch kwaye sinxibelelane nengcali yakho. Sinamava atyebileyo kumxube wekhonkrithi kunye nesityalo sebatch. Kwaye sinokukunceda ukuba ufumane indlela esebenzayo kwishishini.
2) Iindleko zokuhamba: sithwala iindleko
3) Sinesicwangciso sokundwendwela abathengi bexesha elide kunye nembuyekezo yezemali nkqubo qho ngonyaka.
Lungelelanisa: siliqela labantu. Sisebenza kunye kwiinjongo ezifanayo.
Yabelana: wonke umntu unezakhono ezizodwa. Mabenze eyabo indima.
Funda: Sizimisele ukufunda ukuze sibe namandla afanelekileyo.
Khangela: sikulungele ukufuna italente ukuze usijoyine.
Nxibelelana: sikhuthaza ingxoxo-mpikiswano phakathi kwabasebenzi. Naziphi na iingcebiso ezifanelekileyo ekusombululeni iingxaki nasekuphuculeni amandla enkonzo yeqela ziya kuthathwa.
Inkathalo: Siza kunika inkxaso xa abasebenzi behlangabezana neengxaki.
Shandong Gaoqiang New Materials Technology Co., Ltd. ukugubungela i square metres 9100 ukuba indawo yokwakha kunye 600 square metres kuphando lwezenzululwazi kunye elebhu.
Inkampani yethu yakhe umgca wemveliso wekhonkrithi wokudibanisa, uhlalutyo lweekhemikhali kunye nelabhoratri yepropathi ebonakalayo kunye neYunivesithi yaseShandong yeZakhiwo kunye neYunivesithi yaseBeijing yoBunjineli boLuntu, ixhotyiswe ngezixhobo zangoku zokulinganisa kunye nokuvavanya izixhobo ezinkulu kunye nezixhobo. Inkampani yethu ineqela lophando kunye nophuhliso olomeleleyo oluquka oogqirha abaziingcali, iinkosi zase China Academy yoKwakha iNzululwazi.
Ilabhoratri iya kwenza amanani-manani kwaye iqinisekise ukusebenza kweemveliso ezintsha ngokuvavanywa kuluhlu kunyaka omnye. Kodwa uvavanyo lwekhonkrithi kufuneka lwenziwe ngaphambi kokusetyenziswa ngenxa yomahluko wesamente kunye nentlabathi. Ngokwenkonzo yethu emva kwentengiso, siya kunika simahla kwi_isayithi inkxaso yenkxaso xa kufuneka.
Umxube wekhonkrithi: simahla
Ixesha: isampulu iya kuthunyelwa kwiintsuku ezi-2 emva kokuba sifumene iindleko zokuchaza
Ukupakisha: ibhotile emhlophe yeHDPE
Ukucacisa: iDHL okanye iFEDEX
Express iindleko: ngumthengi
Umgaqo-nkqubo: xa umthengi ebhukisha izinto zethu, iindleko ezichazayo ezakhe zenzeka ziya kubalwa njengenxalenye yexabiso.
1. wamkelekile ndwendwele umzi-mveliso wam
Ukuba unomdla kwiimveliso zam nceda uye eChina kwaye undwendwele inkampani yam. Siza kukubonisa inkqubo yemveliso kwaye wenze uvavanyo ekufuneka ulubonile. nceda uthathe ezinye iisampulu xa ubuya uze kuvavanya ngesamente yakho kunye nesanti.
Ihotele: sikubhukishela ihotele.
Iindleko zokuhamba:iindleko zokuhamba ziya kubalwa njengenxalenye yeempahla xa ubhukisha izinto zethu. Sinokholo kwiimveliso zam kuba siye senza okuninzi ngokuthelekisa uninzi lwazo emhlabeni.
2. Siza kutyelela inkampani yakho
Ngenxa yezi zinto zemichiza, ngamanye amaxesha asinakukwazi ukulungisa ingxaki kwi-intanethi. Singabhabha kwisityalo sakho se-batch kwaye sinxibelelane nengcali yakho. Sinamava atyebileyo kumxube wekhonkrithi kunye nesityalo sebatch. Kwaye sinokukunceda ukuba ufumane indlela esebenzayo kwishishini.
Iindleko zokuhamba: sithwala iindleko xa ubhukisha izixhobo zethu.
Sinezicwangciso zokundwendwela abathengi bexesha elide kunye nomgaqo-nkqubo wokuwongwa kwemali minyaka le.
1) IBC itanki 1000kg ukuba 1200kg nganye, 1 × 20 'isikhongozeli kungathatha iiPC 20 IBC itanki, ileyibhile kunokuba isicelo
2) itanki ye-flexi: i-20000kg ukuya kwi-24000kg nganye, i-1 × 20 'isingxobo inokuthatha i-1 pc itanki ye-flexi, ukuLable kunokuba sisicelo
Iintsuku ezi-2 ukuya kwezi-5 emva kokufumana idiphozithi
1. TT 30% idipozithi, kwaye 70% eseleyo afer ukubona ikopi BL
2. I-LC engenakuguqulwa emva kokubona